မန္တလေးမြို့၌ ဆေးကုသမှု ခံယူနေသော ရွှေကျင်တွဲဖက် သာသနာပိုင် မတ္တရာ သူဌေးကျောင်း ဆရာတော်အား နို? - Yangon Media Group
မန္တလေးမြို့၌ ဆေးကုသမှု ခံယူနေသော ရွှေကျင်တွဲဖက် သာသနာပိုင် မတ္တရာ သူဌေးကျောင်း ဆရာတော်အား နို?
မန္တလေးအ ထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီးအတွင်းရှိ နှလုံးရောဂါအထူးကြပ် မတ်ကုသဆောင် အခန်း(၁၁ဝ) တွင် တက်ရောက်ဆေးဝါးကုသမှုခံယူလျက်ရှိသော မဟာအောင် မြေမြို့နယ် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်၊ မတ္တရာသူဌေးကျောင်းဆရာ တော် ရွှေကျင်နိကာယဥပဥက္ကဋ္ဌ၊ မဟာနာယက၊ တွဲဖက်ရွှေကျင်သာ သနာပိုင်ဖြစ်သည့် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တမာနိတသိရီဘိဝံသအား နိုင်ငံ တော်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်က မေ ၂၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက သွား ရောက်၍ ကျန်းမာရေးအခြေအ နေများကို လျှောက်ထားမေးမြန်း ကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်သည် ဆရာတော်ကြီးအား ဖူးမြော်ကန်တော့ပြီးဝတ္ထုငွေနှင့်အတူ သင်္ကန်းအစရှိသည့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများအား မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင် ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်း မောင်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ပါတီ ကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ဆရာတော်ကြီးကလည်း ၎င်းကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသော အိန္ဒိယ၊ နီပေါ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူ အာရှငါးနိုင်ငံ ဓမ္မ ခရီးစာအုပ်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဟောင်းဦးသိန်းစိန်ထံသို့ မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ပြန်လည်ပေး အပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
မတ္တရာသူဌေးကျောင်းဆရာ တော်ကြီးသည် သက်တော် (၈၄)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ရွှေကျင်ဂိုဏ်း၏ တွဲဖက်သာသနာပိုင်အဖြစ် သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်များ အဓိပတိ ဆရာတော်ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တဥာဏိဿရ၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ်၊ စည်ရှင်ကျောင်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တအဂ္ဂဥာဏာဘိဝံသ၊ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာ ဘိဝံသတို့နှင့်အတူတူ ဆောင်ရွက် တော်မူလျက်ရှိသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် နှလုံးအတွင်းသို့ ပိုးဝင်သည့်ရောဂါဖြင့် မန္တလေးအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး၊ နှလုံးရောဂါအထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်သို့တက်ရောက် ဆေးဝါး ကုသမှုခံယူနေသည်မှာ နှစ်လကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မန္တလေး သရက်သီး ပွဲတော်တွင် ၁ဝ ကျပ်တန်ဖြင့် ရောင်းရငွေများကို ကုသိုလ်တော် ဘုရားသို့ လှူဒါန်?
အောင်လံမြို့နယ် ကျောက်ဆည်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေရာကို ခန့်အပ်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း တိုင်ြ
ရှစ်လေးလုံးပါတီ အမည် ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ပါတီဟု အမည်သစ်ဖြင့် ကော်??
အိန္ဒိယ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများ လုပ်ခလစာ ပြင်ဆင်ပေးရန် သပိတ်မှောက် တောင်းဆို